緊急共同声明「ミャンマーの人びとに寄りそう」-坂本龍一さん、瀬戸内寂聴さん、いとうせいこうさんら60名超が賛同 - jvsmyanmar
2021年6月1日、文化人、ジャーナリスト、学者、弁護士、宗教者など60名を超える各界を代表する賛同者が集まり、緊急の共同声明を出しました。*မြန်မာဘာသာပြန်ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ *English follows Burmese
南研子（Rainforest Foundation Japan 代表）
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့် ထပ်တူ ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်သည် ဘဝရှင်သန်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အထူးပူးတွဲကြေညာချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ရက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်များကြောင့် လွန်စွာ စိတ်နှလုံးကြေကွဲခဲ့ရပါသည်။
ရုတ်တရက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားသည့် လူထုက လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား လွှတ်ပေးရေးအတွက် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့အား ကျည်ဆံဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၃လကျော်ကြာလာသည့် ယခုအခါတွင်ပင်လျင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် လေကြောင်းမှဗုံးကြဲမှုများသည် နေ့စဉ်အလား ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုများလည်း နေ့စဉ် များသည်ထက်များလာနေပါသည်။ ထို့ပြင် စစ်တပ်သည် သတင်းမီဒီယာများ နှင့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးတို့အား ဆိုးဝါးစွာဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေသည်။
၎င်းအခြေနေတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ယခုအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအား အစိုးရ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူအညီ (ODA, Official Development Assistance) ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံးပေးအပ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်နှင့်လည်း “အထူးဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်း” ရှိသည် ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်အစိုးရ၏ “အဖြေတစ်ခု အလျင်အမြန်ရစေဖို့ရာ ပိတ်ဆို့မှုများမလုပ်” ဟု ဆိုလိုသည့်သဘောထားကို “အခြေအနေ ကို စောင့်ဆိုင်းရန် အချက်ပြသည်” ဟု စစ်တပ်က ကောက်ယူလိုက်သည်ဆိုလျင် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ တခု ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည် နေရာအသီးသီးမှ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများကို ၎င်းတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူထပ်မျှ ရပ်တည်အားပေးခြင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တပြိုင်နက်တည်းတွင် ဂျပန်အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အရေးယူကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ စတင်နိုင်ရေး တွန်းအားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိသည့် ရပ်တည်ချက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
၁။ အနောက်နိုင်ငံအသီးသီးသည် စစ်တပ်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ တွင် စစ်တပ်နှင့် “အထူး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း” ရှိသည့်နိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဆုဂ၏ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန စသည်တို့၏ တာဝန်ခံများဖြစ်ကြသည့် လူကြီးမင်းများအားလုံးတို့သည် မိမိတို့ ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ ဘဝရှင်သန်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်နေသည်ဆိုသည့်အချက်ကို သတိပြုမိလျက် စစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ရပ်တန့်စေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တဖန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရေးအတွက် ကူညီမှုများအား ချက်ချင်း‌ အလျင်အမြန် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေဖြင့် တည်ဆောက်လာခဲ့သည့် ‘ဂျပန်-မြန်မာ အသင်း’ သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လျက် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ဖျက်ဆီးခြင်း မခံရစေရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရအား ကျေးဇူးပြု၍အလျင်အမြန်တောင်းဆိုပေးပါ။ အသင်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့် အကြီးစား လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဖြစ်ပြီး အင်အားကြီး ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်အတွက် ကြီးမားသည့် လွှမ်းမိုးနိုင်မှု ရှိမည်ဆိုသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ၎င်းအသင်းတွင် အထူးအကြံပေးအရာရှိချုပ် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် တာရိုး အာဆိုး၊ ၎င်းဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အာဏာရညွှန့်ပေါင်းပါတီ ကိုးမဲတိုးပါတီအကြံပေး ကာဇုယောရှိ ရှိရာယာမ၊ ၎င်း အမှု ဆောင်အရာရှိ အာဏာရလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်ပါတီမှ အာကီရာ အာမာရီနှင့် ကာဆုနိုဘု ကာတိုး၊ အတိုက်အခံ ရိကဲန်းမင်းရှုတိုးပါတီမှ ဂျွန် အာဇုမိနှင့် တဲဆုရို ဖုကုယာမ၊ အာဏာရ ညွန့်ပေါင်းပါတီ ကိုးမဲတိုးပါတီအကြံပေး ယူအိချိရိုး အုအိုဇုမိ စသူတို့ ပါဝင်ပါသည်။
၃။ စစ်တပ်သည် “မှန်ကန်မှုမရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ”ဟူ၍ စစ်အာဏာသိမ်းမှု၏ အကြောင်းပြချက် အဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့သော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် ဆာဆာကာဝါ ယောဟဲအိ အား အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့် ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး နှစ်ထပ်မဲပေးမှုများ တားဆီးရန်အတွက်လည်း အထူး မှင် ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတစွာ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာကျင်းပခဲ့သည်ဟု အသေအချာ အတည်ပြုပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ က လည်း ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို လေးစားလိုက်နာရန် တောင်းဆိုနေပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲသည် လွှတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ ကျင်းပခဲ့ခြင်းကို စစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားပေးရန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခံနေရသူများအား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဏာရညွန့်ပေါင်းပါတီများနှင့် အတိုက်အခံပါတီများမှ များစွာသော လွှတ်တော်အမတ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် “မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ကူညီသည့် လွှတ်တော် အမတ်များအဖွဲ့” က တညီတညွတ်တည်း ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်၏ ဦးတည်ချက်နှင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုချက်များ အားလုံးကို အပြည့်အစုံ ထောက်ခံပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရအား အဆိုပါ တောင်းဆိုချက် များကို အဖြေပေးရန်နှင့် ထိရောက်စွာ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် လျင်မြန်စွာ စတင် လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် ထပ်မံ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
ဘဝရှင်သန်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရေး တို့ထက် အထူး အရေးကြီးသည့် အရာမည်သည် မရှိဟုသည့် ခံယူချက်ဖြင့် ဆန္ဒပြုလျက် -
အထူး ပူးတွဲ ကြေညာချက်၊ ထောက်ခံသူများ
Standing with the people of Myanmar ―Restore Life, Peace, and Democracy to Myanmar― Urgent Joint Statement
We are heartbroken by the tragedy that has been unfolding in Myanmar since February 1.
In protest against the sudden coup d'état by the military, countless people across Myanmar have been calling for freedom, democracy, and the release of Aung San Suu Kyi, but the army’s response has been bullets.
More than four months since the coup, civilian casualties are still on the increase owing to daily shootings and bombings. In addition, the military has placed severe restrictions on the press and the internet.
Japan, through its Official Development Assistance (ODA) is the world’s largest aid donor to Myanmar, and is said to haveaspecial relationship with the military. However, we fear that if the Japanese government continues to take the attitude of ‘encouragingasolution without sanctions,’ the military may interpret that stance as tacit acceptance of the situation.
We, as citizens of Japan, must raise our voices in support for the people of Myanmar, reach out, and show that our hearts are with them. Our aim, in addition to offering encouragement to the people, is to push the Japanese government and corporations to take action.
We call upon individuals who are in positions of political authority to do the following:
1. Western countries are imposing sanctions on military personnel and corporations connected with them. Japan is the only developed country that hasaclose relationship with Myanmar’s military. We ask the Suga administration, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance to be aware how their decisions and actions affect the lives, human rights, and hopes for the future of the people of Myanmar. We call on them to take measures swiftly to stop the brutality of the military and help Myanmar regain its path to democracy.
2. We ask the The Japan-Myanmar Association, which has established close relations with Myanmar onagrass-roots level, immediately to urge the generals to stop the violence and prevent democracy from collapsing. The association's board of directors consists of officials from major Japanese corporations operating in Myanmar and influential members of the Diet, who should be able to exert leverage. The chief advisor is Taro Aso, Deputy Prime Minister; the vice-chairman is Kazuyoshi Shirahama, advisor to the Komeito Party; board members include Akira Amari and Katsunobu Kato of the Liberal Democratic Party, Jun Azumi and Tetsuro Fukuyama of the Constitutional Democratic Party, and Yuichiro Uozumi, advisor to the Komeito Party.
3. The military has cited election fraud as the reason for the coup. However, Japan dispatched an election monitoring team headed by Yohei Sasakawa, the Japanese government representative for Myanmar's national reconciliation, and provided special ink to prevent double voting. The Ministry of Foreign Affairs has confirmed that the election was conducted peacefully and transparently. The UN has called for the results to be respected. We call on the Japanese government to stress to the military and the international community that the election was conducted freely and fairly, and demand the release of Aung San Suu Kyi and the other people being unfairly detained.
4. We fully support the goals and requests of the March 31 joint statement of the Parliamentarians Supporting Democracy in Myanmar,agroup of parliamentarians from both ruling and opposition parties. We call on the government to respond to this request and implement it as soon as possible.
--With wishes for life, liberty, and democracy. Nothing takes precedence over these.